Mpanamboatra sy mpamatsy milina Syringe Prefilled | IVEN
Andalana famokarana syringe mialoha - PFS
Ny syringe mialoha dia karazana fonosana fanafody vaovao novolavolaina tamin'ny taona 1990. Taorian'ny 30 taona nisian'ny popularization sy fampiasana azy dia nitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra sy ny fivoaran'ny fitsaboana ara-pitsaboana. Ny syringes efa vita dia ampiasaina amin'ny famonosana sy fitehirizana fanafody avo lenta ary ampiasaina mivantana amin'ny tsindrona na ophthalmology, otolojia, orthopaedika, sns.
Inona ilay Syringe efa niomana?
Amin'izao fotoana izao dia tsy dia nampiasaina intsony ny andiany voalohany amin'ny vera. Ny andiany faharoa dia azo ampiasaina eran'izao tontolo izao ny tsindrona plastika tsy azo ampiasaina. Na dia manana tombony amin'ny vidiny ambany sy mora ampiasaina aza izy io, dia misy lesoka ihany koa, toy ny fanoherana asidra sy alkaly, fanodinana ary fahalotoan'ny tontolo iainana. Noho izany, ny firenena mandroso sy ny faritra dia nampiroborobo tsimoramora ny fampiasana ny zana-tsindrona mialoha feno. Ny karazana syringe alohan'ny famenoana dia manana ny asan'ny fitahirizana fanafody sy ny tsindrona mahazatra amin'ny fotoana iray, ary mampiasa ireo fitaovana miaraka amin'ny fampifanarahana tsara sy filaminana. Tsy hoe azo antoka sy azo itokisana ihany izy io, fa mampihena ny asa sy ny vidin'ny famokarana hampiasaina amin'ny fatra lehibe indrindra raha ampitahaina amin'ny "tavoahangy fanafody + syringe" nentim-paharazana, izay mitondra tombony maro ho an'ny orinasam-panafody sy ny fampiasana klinika. Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny orinasa pharmaceutika mandray sy mampihatra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Ao anatin'ny taona vitsivitsy, dia ho lasa fomba famonosana zava-mahadomelina lehibe izy io, ary hanolo tsikelikely ny satan'ny syringes mahazatra.
Inona ireo toetra mampiavaka ny syringe?
Amin'ny maha karazana fonosana zava-mahadomelina vaovao azy dia mampiavaka ny syringe prefilled:
(1) Mampiasà singa fitaratra sy fingotra avo lenta, izay mifanentana tsara amin'ny zava-mahadomelina ary afaka miantoka ny fiorenan'ny rongony fonosana;
(2) Fampihenana ny fako ateraky ny fampidirana zava-mahadomelina mandritra ny fitehirizana sy famindrana, indrindra ho an'ny fiomanana biolojika lafo vidy;
(3) Fanalavirana ny suction miverimberina aorian'ny fampiasana diluents ary mampihena ny fahafahan'ny fahalotoana faharoa;
(4) Fampiasana milina famenoana hamenoana ny rano be dia be, izay marina kokoa noho ny fitrohana ny mpitsabo amin'ny tanana;
(5) Manondro ny anaran'ny zava-mahadomelina mivantana amin'ny fitoeran-tsindrona, izay tsy mora ny manamboatra toeram-pitsaboana; Raha mora esorina ilay marika, dia manampy koa ny mitahiry ny mombamomba ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny marary.
(6) Mora ny miasa ary mamonjy antsasaky ny fotoana any amin'ny toeram-pitsaboana noho ny mampiasa ampoule, izay mety indrindra amin'ny marary vonjy maika.
Inona ny isan'ireo fampiharana ny Syringe Prefilled?
(1) fampiasana tsindrona: esory ny syringe efa nomen'ny orinasa pharmaceutika, esory ny fonosana ary atsindrohy mivantana. Ny fomba fanindronana dia mitovy amin'ny avaratry mahazatra.
(2) Aorian'ny fanesorana ny fonosana dia apetraka amin'ny lohan'ny cone ny fanjaitra mifanentana, ary azo atao ny manasa amin'ny fandidiana.
Misy karazany ny masinina syringe efa niotrika avy amin'ny IVEN Pharmatech, ny masinina syringe efa voafaritra izay fantatry ny fizotry ny famokarana sy ny fahaizany.
Fihinana syringe efa vita alohan'ny famenoana dia azo atao amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy sy ny fomba fanao tanana.
Rehefa avy nampidirina ho ao anaty masinina ilay veromanitra efa fenoina dia fenoina ary nasiana tombo-kase, avy eo azo zahana sy voamarika an-tserasera ihany koa ny syringe efa notanterahina, izay hanarahana ny fitsidihana mandeha ho azy. Hatramin'izao, ny syringe efa vita dia azo alefa amin'ny sterilization sy milina fonosana blister ary milina fanaovana carton ho an'ny famonosana bebe kokoa.
Ny fahaiza-manao lehibe indrindra amin'ny syringe efa vitaina dia 300pcs / hr ary 3000pcs / hr.
Ny milina syringe efa vita dia afaka mamokatra ny volavolan-tsindrona toy ny 0,5ml / 1ml / 2ml / 3ml / 5ml / 10ml / 20ml sns.
Fampidirana ireo tombontsoa azo avy amin'ny vokatra
Ny masinina syringe efa vita dia mifanaraka amin'ny syringes efa vita presterilized, sy ny vokatra namboarina rehetra. Izy io dia miaraka amin'ny alàlan'ny lalamby avo lenta avo lenta ary tsy misy fikojakojana. Voahosotra amina motera servo 2 namboarin'i Japan YASUKAWA.
Fametahana vacuum, fisorohana ireo poti-micro avy amin'ny fikororohana raha ampiasana «vibrator» ho an'ny mpanakanana ny «rubber». «Sensors vacuum» koa dia nalaina tamin'ny marika Japaness. Ny fanalana volo dia azo ovaina amin'ny fomba tsy misy dingana.
Atao printy ny masontsivana momba ny fizotrany, tahiry nohaingoina.
Ny fitaovam-pifandraisana rehetra dia ny AISI 316L sy ny silika vita amin'ny silika.
Sakan'ny efijery mampiseho ny toe-miasa rehetra, ao anatin'izany ny tsindry banga amin'ny fotoana tena izy, tsindry azota, tsindry amin'ny rivotra, fiteny maro no misy.
AISI 316L na paompy pistion fihodinana seramika avo lenta dia entina miaraka amin'ny motera servo. Ny set-up fotsiny amin'ny efijery mikasika ny fanitsiana mandeha ho azy. Ny paompy piston tsirairay dia azo alefa tsy misy fitaovana.
Mameno ny volume 0.5ml, 1ml, 1-3ml, 5ml, 10ml, 20ml
Isan'ny lohan'ny famenoana 10 Sets
fahafahana 2 400-6,00 Syringes / ora
Y Ny halaviran-dàlana 300 mm
azota 1Kg / cm2, 0,1m3 / min 0,25
Rivotra voafintina 6kg / cm2, 0.15m3 / min
Herin'aratra 3P 380V / 220V 50-60Hz 3.5KW
lafiny 1400 (L) x1000 (E) x2200mm (H)
Previous: Glass Bottle IV Solution Production Line
Manaraka: 30ml tavoahangin-tavoahangy vita amin'ny vera sy milina fametahana rongony